SOMALITALK - SAADAALIN
Saadaal laga bixinayo Qofka uu C/laahi Yuusuf u magacaabi Doono Ra'iisul Wasaaraha Somalia.
Cabdi Casiis M. Guuleed "Afrika"
C/lahi Yusuf: xafladii dhaarta(Sawirka AP)
Inkastoo ay adag tahay in Saadaal laga bixiyo Qof aan wali Miiska la soo saarin haddana waxaa illaa iyo hadda socda La Tashiyo uu la leeyahay Madaxwaynaha Cusub ee Somalia Xubnaha Baarlamaanka Federaalka Somalia iyo Siyaasiyiin aan ka mid ahayn Baarlamaanka oo uu kala tashanayo Qofkii uu umagacaabi lahaa Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Federaalka Somalia.
Xeel Dheerayaasha Siyaasadda Somalia ayaa sii saadaalinaya in Madaxwaynaha Cusub uu Saddex qof midkood uu u magacaabi doono inuu noqdo Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia. Waxaana Saddexda Qof ee loogu hadal haynta badan yahay ay kala yihiin Maxamed Cumar Xabeeb "Maxamed Dheere", Xuseen Maxamed Caydiid, iyo Maxamed Qanyare Afrax.
Inkastoo Jagaddan loo magacaabi karo Siyaasiyiin aan Saddexdanba ahayn haddana waxay hadal hayntu u badan tahay in Saddex Nin Midkood loo magacaabi doono Jagadda Ra'iisul Wasaaraha Somalia. Waxaana Saddexdan Nin uu mid kastaa Heshiis hoosaad horay ugula galay C/laahi Yuusuf in haddii uu ku soo baxo Jagaddan inuu u magacaabo Ra'iisul Wasaaraha Somalia.
Su'aasha taaganse waxay tahay Saddex Nin mid kastaa Miisaan intee le'eg ayuu ku leeyahay Gudaha Somalia. Muxuuse soo kordhin karaa haddii xilkan loo magacaabo. Waxay Dadku ka bixinayaan Fikrado kala duwan. Inkastoo aanan mid mid u soo xigan doonin Magacyadda Dadka sii odorasaya Mustaqbalka Siyaasadeed ee Saddexdan Nin waxaan Haddana si kooban u eegaynaa Awoodooda iyo Miisaankooda Siyaasadeed ee ay ku dhex leeyihiin Koonfurta Somalia.
Maxamed Dheere waxa uu ka mid ahaa Musharixiintii la tartantay C/laahi Yuusuf ee ku haray Wareegii Koowaad ee Madaxwaynanimadda Somalia. Waxaana uu ka mid ahaa Golaha SRRC ee ay Itoobiya taageerto oo C/laahi Yuusuf oo ka mid Xubnihiisa.
Maxamed Dheere waxa uu heshiis hoose billawgii Shirka kula galay C/laahi Yuusuf inuu u magacaabo Jagadda Ra'iisul Wasaaraha Somalia haddii uu ku guulaysto Jagadda Madaxwaynanimadda Somalia. Waxaana Maxamed Dheere laf ahaantiisu Waraysi uu Habeenkii Xalay ahaa siiyay Iddaacad FM ah oo Jawhar ku taala ku sheegay inuu rajaynayo inay hogaamiyaan inta ka dhiman Dawladda mar haddii uu C/laahi Yuusuf ku guulaystay Madaxwaynanimadda Somalia. laakiin Rajadii laga qabay in Jagadaasi loo magacaabo Maxamed Dheere waxaa shaki galiyay markii uu Heshiis la galay C/qaasim Salaad Xasan intii uu socday Ololaha Musharixiinta Madaxwaynanimadda Somalia. iyadoo wixii waqtigaasi ka dambeeyay uu Maxamed Dheere badalay Mawqifkiisa kuna dhawaaqay in Beelaha Hawiye ay Xaq u leeyihiin inay helaan Jagadda ugu saraysa Somalia. sidaas darteed Rajadda laga qabi karo in Jagadaasi loo magacaabo Maxamed Dheere waxaa la oran karaa waa 60%.
Maxamed Dheere Beel ahaan waxa uu ka soo jeeda mid ka mida Beelaha Awooda ku leh Muqdisho. Waxaana ay isku beel yihiin Ganacsato Awood leh isla markaana gacanta ku haya Illo Dhaqaale oo Muhiim ah oo ay ka mid yihiin Abuukar Cumar Cadaan oo Maamula Dekadda Ceel Macaan, iyo Bashiir Raage oo Maamula Garoonka Cisaleey. Iyadoo la aaminsan yahay in haddii uu ku guulaysto Jagadaasi in Maxamed Dheere uu taageeri ka heli doono Ganacsatadaasi.
Maxamed Dheere waxa uu Maamulaa Qaybo ka mida Gobalka Shabeeladda Dhexe oo uu ku faano inuu ka dhigay Goob Nabdoon. Laakiin waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay Nin Hogaan Ad Adag oo aan ka dabcin Mawqifkiisa. Waxaana Goobaha uu ka taliyo ay Dadku ka cawdaan Qaabka uu Maamulkiisu u shaqeeyo iyo Canshuuro Xad Dhaaf ah oo uu ka qaado Dadka ku dhaqan Deegaanadda uu ka taliyo.
Maxamed Dheere oo haatan Xubin ka ah Baarlamaanka Federaalka Somalia ayaa haddii aan loo magacaabin Jagadda Ra'iisul Wasaaraha waxaa la filayaa inuu noqdo Wasiirka Arrimaha Gudaha. Inkastoo Jagadaasi laftigeeda ay jiraan Siyaasiyiin kale oo ku haminaysa in loo magacaabo isla markaana ay isku hayb yihiin Maxamed Dheere.
Xuseen Maxamed Caydiid.
Xuseen Caydiid Waa Nin Dhalinyaro ah oo Siyaasadda ku soo biiray markii uu dhintay Aabihii Marxuum Gen Maxamed Faarax Caydiid. Waxaana uu ku hantay Mansabka Siyaasadeed ee uu jooga Wadadii uu Aabihiis u jeexay oo ahaa Hogaamiyaha Koonfurta Muqdisho.
Xuseen Caydiid Waxa uu laf ahaantiisu ka mid ahaa Musharixiintii ku hartay Wareegii Koowaad ee Tartanka Madaxwaynanimadda. Waxaana ay taasi Niyad Jabku abuurtay Siyaasiga Da'da Yar ee isku haystay inuu Xaq u leeyahay Hogaaminta Dalka Somalia. isla markaana uu Dalka u baahan yahay Hogaamiye Da' yar oo Habeen iyo Maalin u soo jeedi kara Xallinta Mashaakilka ka jiraSomalia.
Xuseen Caydiid waxa uu ka mid yahay Siyaasiyiinta Heshiis Hoosaadka kula galay C/laahi Yuusuf inuu u magacaabo Jagadda Ra'iisul Wasaaraha haddii uuku guulaysto Madaxwaynanimadda Somalia. Waxaana uu ka mid noqday Xubnihii ugu horeeyay ee taageera Madaxwaynanimadda C/laahi Yuusuf. Isagoo waliba kala qayb galay Madaxwaynaha Somalia Kulankii uu la yeeshay dhigiisa Kenya, Mwai Kibaki.
Xuseen Caydiid Beel ahaan waxa uu ka soo jeeda mid ka mida Beelaha Awooda ku leh Muqdisho. Waxaana uu Maamulaa Xaruntii hore ee Madaxtooyadda Qaranka, Wasaaraddii Warfaafinta, Taliskii Ciidanka Booliska iyo Goobo Istaraatiiji ah. Waana taa midda keeni karta in loo arko Hogaamiye Muhiim ah oo Muqdisho wax ka tari kara haddii loo magacaabo Ra'iisul Wasaare.
Laakiin waxaa la aaminsan yahay in Xuseen Caydiid Awood ku filan inuu helo mooyaanee inuusan lahayn Diblomaasiyad uu ku kasban karo Taageeradda Beeshiisa haddii loo magacaabo Jagadaasi. Waxaana Xuseen Caydiid oo ay isku beel yihiin C/qaasim Salaad Xasan caqabad ku noqon karta sidii uu uga hor yimid Dawladii uu Madaxda ka ahaa Ninka ay Beesha Wadaagaan marna Abtiga ugu aadan. Iyadoo Jufadda C/qaasim iyo Taageerayaashiisu ay suurtagal tahay inay ka hor yimaadaan Xukuumad uu horkacayo Xuseen Caydiid.
Xuseen Caydiid waxaa sidoo kale ay Caqabadda ugu wayn ka soo wajihi kartaa Ganacsataddii Shirkadda Barakaat Group of Companies oo Xuseen la aaminsan yahay inuu lahaa Sababtii lagu xiray kadib markii uu Maraykanka u gudbiyay in Shirkadaasi ay xiriir la leedahay Urur Waynaha Al-Qaacidda. Waxaana Mr Caydiid uu u muuqdaa Siyaasi leh Hami Siyaasadeed. Laakiin Rajadiisa Xilkaasi ku aadan ay le'egtahay 70%. Iyadoo la aaminsan yahay in haddii Xilkaasi loo magacaabana inuu ka soo dhalaali karo.
Xuseen Caydiid ayaa haddii uu ku guulaysan waayo Jagaddan Ra'iisul Wasaaraha waxay dad badan sii saadaalinayaan in loo magacaabi karo Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Waxaana Xuseen Caydiid uu haystaa Dhalashadda Dalka Maraykanka. Isagoo ka mid ahaa Ciidamadda Mariiniska Maraykanka kuwooda Kaydka ah. Laakiin wixii ka dambeeyay markii uu ka goostay Ciidamadda Maraykanka waxaa yarayd Xiriirka uu lahaa Dawladda Maraykanka.
Maxamed Qanyare Afrax waxa uu ka mid ahaa Musharixiintii la tartamay C/laahi Yuusuf. Waxaana uu ahaa Musharixii Saddexaad ee ugu codadka badnaa Wareegii Koowaad. Isla markaana u gudbay Wareega Labaad kadib markii uu diiday inuu tanaasulo. Waxaana uu Qanyare la soo baxay Miisaan Siyaasadeed oo aan horay loo filayn intii lagu guda jiray Tartanka Madaxwaynanimadda Somalia.
Qanyare ma ahayn Hogaamiyayaasha Xiriirka wanaagsan la leh C/laahi Yuusuf.Iyadoo tan iyo Billawgii Shirka uu ka mid ahaa Hogaamiyayaasha Caqabadda ku ahaa Hamiga Siyaasadeed ee C/laahi Yuusuf. Wuxuuna ka mid ahaa Koox la baxday G-8 oo billawgii Shirka ku bahoobay inay ka hortagaan C/laahi Yuusuf Laakiin Xilli dambe ayeey Ciyaartu is badashay kadib markii Maxamed Qanyare iyo C/laahi Yuusuf ay isaga soo dhawaadeen dhinaca Siyaasadda.Maxamed Qanyare waxa uu la xulufoobay C/laahi Yuusuf markii ay Saaxibadiis Muuse Suudi iyo Cusmaan Caato ku biireen Isbahaysi la baxay Golaha Samata Bixinta Qaranka oo looga dhawaaqay Balcad. Wuxuuna wixii waqtigaasi ka dambeeyay Qanyare noqday Siyaasiyiinta ay isku mawqifka yihiin C/laahi Yuusuf.
Laakiin Waraysi uu bixiyay Maxamed Qanyare xilliyo Xasaasi ah waxa uu u muuqday Nin aan dhinacna haysan oo Saaxiibadiisii horana ka horay kuwa cusubna aan la jaanqaadi Karin. Wuxuuse Qanyare ahaa Siyaasiga kaliya ee Soomaaliyeed ee ay ku daba faylsantahay Beeshiisa oo dhan. Isla markaana aysan jirin cid ka daba qaylinaysa.
Maxamed Qanyare ma jiro Heshiis hoose oo uu horay ula galay C/laahi Yuusuf. Waxa uuna ahaa Siyaasi Hankiisa uu Runta ka fogaa oo aaminsanaa in la dooran doono. Waana taa midda keentay inuusan wax heshiis ah la galin C/laahi Yuusuf marka laga reebo inay ku bahoobeen Nacaybka Kooxo kale oo ay Siyaasadda isaga soo horjeedeen.
Qanyare waxa uu ka mid yahay Siyaasiyiinta is bad badalka badan ee hadba Mawqifka qaata. Waxaana is bad badalkiisa Faraha badan ee ka soo billawday markii uu Cali Mahdi kala soo goostay Jagaddii uu u magacaabay ee Guddoomiyaha USC oo uu ku soo biiray Dawladdii Maxamed Faarax Caydiid ay keentay inuu waayo Isbahaysi iyo Siyaasiyiin si dhab ah u aamina Ballamada iyo Axdiga uu gallo.
Inkastoo uusan jirin Heshiis la ogyahay oo qeexaya in Maxamed Qanyare loo magacaabo Ra'iisul Wasaare haddana heshiis hoose oo Habeenkii Doorashadda Madaxwaynaha dhex maray isaga iyo C/laahi Yuusuf markii uu dareemay inuusan u gudbin Karin Wareega Saddexaad ayaa la rumaysan yahay in loogu ballanqaaday Qanyare in loo magacaabi doono Ra'iisul Wasaare haddii uu Codadka Taageerayaashiisa ku biiriyo C/laahi Yuusuf taasoo keentay in C/laahi Yuusuf uu Aqlabiyad Ballaaran ku helo Madaxwaynanimadda Somalia. Waxaana Qanyare wixii waqtigaasi ka dambeeyay soo baxayay Tuhumo muujinaya inuu Xilkaasi isku diyaarinayo. Inkastoo Waraysi uu BBC-da siiyay uu ku sheegay in Xil kasta oo loo magacaabo uu ka fiirsan doono. Taasoo shaki sii galisay Rajadda laga qabay in Qanyare uu ku soo baxo Jagadaasi.
Maxamed Qanyare Beel ahaan waxa uu laf ahaantiisu ka mid yahay Beelaha Awooda ku leh Muqdisho. Inkastoo uu ku kooban yahay Deegaano yar oo Muqdisho ka mida. Haddana waxa uu leeyahay Ciidan xoogan oo ka amar qaata iyo Goobo Rasmi ahaan loogu aqoonsan yahay inuu ka taliyo. Waxa uu Maamulaa Garoonka Dayniile oo ka mida Garoomadda Macmalka ah ee Diyaaradaha Jaadku ay ka soodagaan.
Ma ahan Deegaanadda uu ka taliyo Qanyare kuwo Istaraatiijiyad ahaan loogu xilan karo in loo dhiibo Ra'iisul Wasaare, mana laga fili karo Awood Beeleed uu Muqdisho uga socod siin karo Dawladda lagu soo dhisayo Kenya. Waxaase la aaminsan yahay in haddii la doorto uu ugu yaraan Wax dhaqaajin karo.
Si kastaba ha ahaatee Jagaddan oo sida aan Billawgii Qormadaydaba ku sheegay aan loo nisbayn Karin Saddexdan Siyaasi oo kaliya haddana waa kuwa loogu hadal haynta badan yahay. Waxaase Hubaal ah in Ra'iisul Wasaaruhu uu ka soo dhex bixi doono Beelaha Hawiye Shaqsigii doonaba ha ahaadee.
Madaxwaynaha Cusub oo illaa iyo hadda ay ku adag tahay Saaxiibadiis sidii uu ugu qaybin lahaa Halka Jaggo waxaa looga baahan yahay in Shaqsiga uu magacaabayo uu ka fiiriyo dhinac walba. Mana ahan Arrintu anigaa Warsangali Abgaal ah oo Muqdisho Maalin ku qaban kara, iyo Anigaa Sacad ah oo Xafiiskii Madaxwaynaha haya, iyo anigaa Mudan oo Murursade ah, kaagana hiiliyay Hawiye ee Xuliddu waxay noqon doontaa mid dad badan lagala tashado oo laga eego Qofka Jagaddan loo magacaabayo Miisaankiisa Ciidan, Siyaaso, Beeleed, iyo Aqoontiisa gaarka ah. Waa inuu noqdaa Ra'iisul Wasaaruhu Shaqsi ka gadmi kara Shacabka Soomaaliyeed iyo Bulsho Waynta Caalamkaba.
C/LAAHI YUUSUF OO LOO DHAARIYAY MDFKMG
NINKA ADDUUNKA UGU DHEER OO AH SOOMAALI:::::